အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် ရာသီအစပွဲစဉ်တွေမှာ အကောင်းဆုံးနိုင်ပွဲ ရယူနိုင်မှု အင်တာမီလန် စံချိန်တင် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင္း နိုင်ငံတကာသတင်း အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် ရာသီအစပွဲစဉ်တွေမှာ အကောင်းဆုံးနိုင်ပွဲ ရယူနိုင်မှု အင်တာမီလန် စံချိန်တင်
Antonio Conte Coach (Inter) during the Italian Friendly Match "Serie A" match between Lugano 1-2 Inter at Cornaredo Stadium on July 14 , 2019 in Lugano, Switzerland. (Photo by Maurizio Borsari/AFLO) No Use China. No Use Taiwan. No Use Korea. No Use Japan.
အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် ရာသီအစပွဲစဉ်တွေမှာ အကောင်းဆုံးနိုင်ပွဲ ရယူနိုင်မှု အင်တာမီလန် စံချိန်တင်
အင်တာမီလန် အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ကစားခဲ့တဲ့ စီးရီးအေပွဲစဉ်မှာ တိုရီနိုအသင်းကို ၃ ဂိုးပြတ်နဲ့ နိုင်ခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၅၀-၅၁ ရာသီနောက်ပိုင်း ရာသီအစပွဲစဉ်တွေမှာ အကောင်းဆုံး နိုင်ပွဲရယူနိုင်မှု စံချိန်ကို ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အင်တာမီလန် အသင်းဟာ ရာသီအစပွဲစဉ်တွေမှာ အဝေးကွင်းနိုင်ပွဲ စံချိန်သစ်ကို ထပ်မံရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ စီးရီးအေ ပွဲစဉ် ၁၃ ပွဲ ပြီးချိန်မှာ အင်တာမီလန် အသင်းဟာ ၁၁ ပွဲ နိုင်ပွဲရယူနိုင်ခဲ့ရာ စီးရီးအေ သမိုင်းတစ်လျှောက် ၁၉၅၀-၅၁ နောက်ပိုင်း စီးရီးအေ အစပိုင်းမှာ နိုင်ပွဲအများဆုံး ရယူနိုင်တဲ့ရာသီ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
အငျတာမီလနျ တိုကျစဈမှူး လူကာကူဟာ စီးရီးအပှေဲစဉျ ၁၃ ပှဲမှာ ၁၀ ဂိုး သှငျးယူနိုငျခဲ့ရာ ၁၉၄၈-၄၉ ရာသီတုနျးက စတီဖာနို အမျရာဈ နောကျပိုငျး စီးရီးအေ အစပိုငျးပှဲတှမှော ဂိုးအမြားအပွား သှငျးယူနိုငျတဲ့ တဈဦးတညျးသော အငျတာမီလနျ တိုကျစဈမှူး ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ အငျတာမီလနျ အသငျးဟာ လကျရှိရာသီရဲ့ ရာသီအစပှဲစဉျ ၁၃ ပှဲမှာ အဝေးကှငျးပှဲစဉျ ၇ ပှဲစလုံး နိုငျပှဲရယူနိုငျခဲ့ရာ အသငျးသမိုငျးတဈလြှောကျ ရာသီအစ ပှဲစဉျတှမှော အဝေးကှငျး နိုငျပှဲအမြားဆုံး ရယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။
အင်တာမီလန် တိုက်စစ်မှူး လူကာကူဟာ စီးရီးအေပွဲစဉ် ၁၃ ပွဲမှာ ၁၀ ဂိုး သွင်းယူနိုင်ခဲ့ရာ ၁၉၄၈-၄၉ ရာသီတုန်းက စတီဖာနို အမ်ရာစ် နောက်ပိုင်း စီးရီးအေ အစပိုင်းပွဲတွေမှာ ဂိုးအများအပြား သွင်းယူနိုင်တဲ့ တစ်ဦးတည်းသော အင်တာမီလန် တိုက်စစ်မှူး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အင်တာမီလန် အသင်းဟာ လက်ရှိရာသီရဲ့ ရာသီအစပွဲစဉ် ၁၃ ပွဲမှာ အဝေးကွင်းပွဲစဉ် ၇ ပွဲစလုံး နိုင်ပွဲရယူနိုင်ခဲ့ရာ အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် ရာသီအစ ပွဲစဉ်တွေမှာ အဝေးကွင်း နိုင်ပွဲအများဆုံး ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Previous articleနယူးယောက် မြို့တော်ဝန်ဟောင်း အမေရိကန် သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲ ပြိုင်မယ်
Next articleအမျိုးသမီးတွေအပေါ် အကြမ်းဖက်ခံရမှုတွေက အရင်အစိုးရလက်ထက်ကထက် ပိုများလာ